Living Coral no loko Pantone an'ny taona 2019 | Famoronana an-tserasera
Ya manana ny loko Pantone vaovao amin'ny taona 2019 isika ary ity dia Living Coral. Tahaka ny isan-taona ary arahinay avy amin'ireo andalana ireo ao amin'ny Creativos Online, ity mari-boninahitra malaza ity dia nanome antsika ny loko izay "azon'izy ireo" ho toy ny lokon'ny taona.
Antenaina hanome aingam-panahy ity loko ity ho an'ny karazana indostria rehetra mifandraika amin'ny famolavolana sy ny famoronana amin'ny lafiny rehetra. Miresaka momba ny sary, lamaody, sary ary maro hafa izahay izay misy ifandraisany amin'ny fampiasana loko.
Taorian'ny nandao ny loko volomparasy marevaka tamin'ny taon-dasa, ny loko vaovao dia Coral velona PANTONE 16-1546. Izy io dia alokaloka mahery sy malefaka izay natao hitondra izany angovo natiora natiora izany.
Ny zavatra tadiaviny ary tadiaviny koa dia ny hampita izany fanantenana izany amin'ny tontolo iray izay mitohy ny fanovana. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay niovan'ny fahazaran-tsika isan'andro amin'ny fomba izay mbola tsy fantatsika akory hoe ho aiza.
Izy io dia i Pantone izay manondro fa nisafidy io loko io dia vokatry ny fanehoan-kevitra manoloana ny fanafihan'ny teknolojia dizitaly sy ny tambajotra sosialy; Ny sasany izay ampahany mazàna amin'ny androntsika ary, araka ny efa nolazainay, dia fahazarana.
Azontsika atao koa ny miresaka momba ny adjectif hafa mifandraika amin'ity loko Living Coral ity. Afaka mampiasa ianao ny fiaraha-miasa amin'ity loko ity, ny fiainany feno, izany fanantenana be dia be ilaintsika isan'andro izany sy ireo hetsika izay mahatonga ny fifaliana ho azy ireo.
Loko iray izay ho ampahany amin'ny karazana vokatra rehetra mifandraika amin'izany famoronana, marika, logo, endrika sary na koa ilay antsoina hoe fonosana. Ireo anarana vaovao rehetra ireo hanondro sehatra isan-karazany dia azo hitafy an'ity loko ity mba hampisehoana ny làlana nomerika andehanan'ny maro amintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Living Coral no loko Pantone an'ny taona 2019